the KALI Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Greeting - Khit Minnyo
Unlabelled the KALI Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Greeting
the KALI Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Greeting
by KhitMinnyo on October 29, 2020
ဒီအကြောင်းအရာက တကယ်တော့ စာအုပ်တစ်အုပ် ထုတ်ဖို့ စဥ်းစားထားတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ Kali Linux တင်ထားပြီး သေချာမသိသေးတဲ့သူတွေနဲ့ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ နားမလည်သေးသူတွေအတွက် အထောက်အကူကောင်းကောင်း ပေးနိုင်မယ့် စာအုပ်မျိုး လောလောဆယ် မရှိသေးတဲ့အတွက် ဒီစာအုပ်ကို ရေးဖို့ စဥ်းစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Linux ကို ခုမှ စ သုံးမယ့်သူတွေ အနေနဲ့ Kali Linux ကို မသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ စကားတွေ စာတွေကို နေရာအတော်များများမှာ မြင်နေရပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ မှန်ပေမယ့် အများကြီး မှားပါတယ်။
Kali official website ရဲ့ documentation မှာ ဖော်ပြထားတာကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါမယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဘာသာပြန်ပြမှာမဟုတ်ပါ။ နားလည်သင့်တာကိုပဲ ဖော်ပြမှာပါ။ အတိအကျ သိချင်ရင် မူရင်းပါထည့်ပေးထားတာကို ဖတ်ပါ။
. Should I Use Kali Linux?
Kali Linux ကို သုံးသင့်သလား?
Kali Linux က ဘာတွေများ ကွဲပြားနေလို့လဲ?
Kali Linux ကို အဓိကအားဖြင့် Professional Penetration Testing & Security auditing အတွက် လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် Core Changes တွေကို ဖန်တီးထားရပါတယ်။
Network services disabled by default: Kali Linux contains systemd hooks that disable network services by default. These hooks allow us to install various services on Kali Linux, while ensuring that our distribution remains secure by default, no matter what packages are installed. Additional services such as Bluetooth are also blacklisted by default.
Network services တွေကို default မှာ disable လုပ်ပေးမယ့် systemd hooks တွေ Kali Linux မှာ ပါပါတယ်။ အဆိုပါ hooks တွေသည် Kali Linux မှာ service အမျိုးမျိုး install လို့ ရစေတယ်။ ဘယ် package ကိုပဲ install လုပ်လုပ် default အတိုင်း လုံခြုံမှုရှိနေစေတယ်။ Bluetooth လို additional service တွေကိုလည်း default အတိုင်းမှာတင် blacklist လုပ်ထားပါတယ်။
Custom Linux kernel: Kali Linux uses an upstream kernel, patched for wireless injection.
Wireless Injection တွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် Upstream Kernel ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
A minimal and trusted set of repositories: given the aims and goals of Kali Linux, maintaining the integrity of the system asawhole is absolutely key. With that goal in mind, the set of upstream software sources which Kali uses is kept to an absolute minimum. Many new Kali users are tempted to add additional repositories to their sources.list, but doing so runsavery serious risk of breaking your Kali Linux installation.
ဒီအချက်ကတော့ Kali User အချို့ရဲ့ လက်တည့်စမ်းမှုနဲ့ YouTube က ဂျင်း tutorial တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်မှုကြောင့် Kali System ကို ပျက်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ Kali မှာက customize လုပ်ထားပြီးသား တွေ အတော်များများ ပါပါတယ်။ ဒီတော့ Kali ရဲ့ sources.list file ထဲကို debian source တွေ၊ Ubuntu လို Linux တွေအတွက် ဖန်တီးထားတဲ့ source တွေကို ဖြည့်မိတဲ့အခါ apt upgrade & dist-upgrade တွေမှာရော၊ အချို့သော package installing တွေမှာရော system package တွေကို အခြား source တွေကနေ ယူမိလိုက်တဲ့အတွက် system crush or damage ဖြစ်ကုန်တတ်တဲ့အတွက်ပါ။
Is Kali Linux Right For You? ဒါဆို Kali က သင့်အတွက် ဖြစ်ပါ့မလား?
As the distribution's developers, you might expect us to recommend that everyone should be using Kali Linux. The fact of the matter is, however, that Kali isaLinux distribution specifically geared towards professional penetration testers and security specialists, and given its unique nature, it is NOTarecommended distribution if you're unfamiliar with Linux or are looking forageneral-purpose Linux desktop distribution for development, web design, gaming, etc.
Kali Linux သည် professional penetration tester တွေနဲ့ security specialist တွေအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွဥ် Linux ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသေးသူတွေနဲ့ Development, Web Design နဲ့ Gaming တို့လို ေယဘုယျ သုံးဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့သူတွေကို လုံးဝ recommend မပေးဘူး လို့ Kali က တရားဝင် ဖော်ပြထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ Linux ဆိုတာ ဘာလဲလို့ လေ့လာမယ့် Linux starter တွေရယ်၊ ဟို software သည် software တွေရယ်ကို သုံးသုံးမသုံးသုံး တင်မယ့်သူတွေရယ် ဝင်လာရင် ဒုက္ခရောက်လို့ တမင် ကြိုကာတဲ့ သဘောမျိုးပါ။ သူသည် အချို့သော package တွေကို ပြန်ပြင်ပြီးသုံးထားတယ်ဆိုတာ အပေါ်မှာ ပါခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဥပမာ ပြရရင် VirtualBox (for Hacking Labs) ကိုတောင်မှ virtualbox.org ကနေ ဆွဲတင်ရင် အခြား Linux System တွေမှာ အဆင်ပြေပေမယ့်လို့ Kali မှာ အဆင်မပြေပါဘူး။ apt install virtualbox နဲ့ အလွယ်တကူ install ပြီး သုံးရင်တော့ အဆင်ပြေပြေ လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးနိုင်မှာပါ။
လူတိုင်း အလွယ်တကူ နားလည်အောင် ပြောရရင် A ဆိုတဲ့ package တစ်ခု ကို B ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Kali မှာ သုံးထားတယ် ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် သူ့ကို A လို့ ခေါ်ရင် Kali က သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို A မရှိဘူးဆိုပြီး A ကို အခြား source တွကနေ ဇွတ် ထည့်ဖို့ကြိုးစားရင်တော့ damage ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သာမန် စာစီစာရိုက် နဲ့ သီချင်းဖွင့်နားထောင်တာမျိုးလောက် ရည်ရွယ်သူတွေလည်း Ubuntu လိုဟာမျိုး သုံးရင် ပိုလွယ်တာပေ့ါ။ Web Design လုပ်မယ့်သူတွေကို ဘာလို့ ကာထားလဲဆိုရင်တော့ Adobe Photoshop လိုဟာတွေကို ထည့်သုံးဖို့ ကြိုးစားကြလို့ပါ။ Ubuntu မှာ PlayonLinux လိုဟာမျိုးနဲ့ သုံးနိုင်တဲ့ Photoshop ကို Kali မှာတင်ပြီး design လုပ်ချင်လို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ GIMP ကို လည်လည်ပတ်ပတ် သုံးတတ်ရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ apt install gimp ရိုက်ရုံလေး ပါ။ နောက်ဆုံးကတော့ Game ဆော့ချင်ရင် Kali မသုံးပါနဲ့ဆိုတာပါ။ ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက် ထုတ်ထားတာမဟုတ်လို့ပါ။ ဒီတော့ ဒါတွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် Hacking လေ့လာဖို့အတွက် သုံးချင်တဲ့သူတွေကို မသုံးနဲ့လို့ တားထားခြင်း လုံးဝ​မရှိတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အချို့ ထင်နေကြတာက Kali ကို စ မသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ အစွဲမှားကြီးပါ။ ဒါကို အောက်ဆုံးကျမှ ဆက်ရှင်းပါမယ်။ ခုတော့ ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
Even for experienced Linux users, Kali can pose some challenges. Although Kali is an open source project, it's notawide-open source project, for reasons of security. The development team is small and trusted, packages in the repositories are signed both by the individual committer and the team, and — importantly — the set of upstream repositories from which updates and new packages are drawn is very small. Adding repositories to your software sources which have not been tested by the Kali Linux development team isagood way to cause problems on your system.
Kali သည် Open Source ဆိုသော်ငြားလည်း wide-open source project မဟုတ်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးအတွက် တကယ့်ကို ယုံကြည်စိတ်ချရတာတွေကိုပဲ သုံးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Development Team က သေးသေးလေး ပါ။ လုံခြုံရေးအတွက် စီစစ်ထားတဲ့ package တွေကိုပဲ သူ့ရဲ့ source မှာ ထားရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Kali development team ကနေ စစ်ဆေးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ source တွေကို ထည့်သုံးခြင်းအားဖြင့် system damage ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က တွေ့ရာ App ကို install လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ source ကိစ္စက သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သူ့ source မှာ ရှိနေတာတွေနဲ့တင် ကောင်းကောင်း လုံလောက်ပါတယ်။ Web Development အတွက်ဆိုရင်လည်း XAMPP, SublimeText3, Chrome Browser စတာတွေကို ဘာပြဿနာမှ မရှိဘဲနဲ့ တင်သုံးလို့ရပါသေးတယ်။
While Kali Linux is architected to be highly customizable, do not expect to be able to add random unrelated packages and repositories that are "out of band" of the regular Kali software sources and have it Just Work. In particular, there is absolutely no support whatsoever for the apt-add-repository command, LaunchPad, or PPAs. Trying to install Steam on your Kali Linux desktop is an experiment that will not end well. Even gettingapackage as mainstream as NodeJS ontoaKali Linux installation can takealittle extra effort and tinkering.
Kali ကို highly customize လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့ package တွေကို ထည့်သုံးဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Kali မှာ Termux ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတဲ့သူတွေကလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Kali မှာ Steam ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာတွေအတွက်တော့ အမြဲတမ်း ဖြေရှင်းလို့ ဆုံးမှာမဟုတ် တော့ပါဘူး။ NodeJS လို mainstream package ကိုတောင်မှ apt install nodejs နဲ့ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ ရနေပါပြီ။
Kali Linux ကို စ သုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ install ဖို့ လိုလာတဲ့အခါ Ubuntu လို software center (like PlayStore) ကနေ ထည့်သွင်းလို့ရတာမျိုးထိ လွယ်ကူမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ apt search နဲ့ ရှာလို့ရပေမယ့်လို့ PlayStore မှာ app ရှာသလို လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲခါ တင်လိုက်ဖြုတ်လိုက် ပြဿနာတွေ ကြုံရတော့တာပါပဲ။ ရှေ့မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့က Hacking လေ့လာဖို့သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရှိသမျှ software တိုင်း တင်နေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိချပ်နိုင်ပါတယ်။
In addition, misuse of security and penetration testing tools withinanetwork, particularly without specific authorization, may cause irreparable damage and result in significant consequences, personal and/or legal. "Not understanding what you were doing" is not going to work as an excuse.
However, if you'reaprofessional penetration tester or are studying penetration testing withagoal of becomingacertified professional, there's no better toolkit — at any price — than Kali Linux.
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Hacking လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ Kali လို OS မျိုးသည် အကောင်းဆုံးလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
If you are looking foraLinux distribution to learn the basics of Linux and needagood starting point, Kali Linux is not the ideal distribution for you. You may want to begin with Ubuntu, Mint, or Debian instead. If you're interested in getting hands-on with the internals of Linux, takealook the Linux From Scratch project.
ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သင်က Linux basic ကို လေ့လာဖို့ ရည်ရွယ်ရုံဆိုရင်တော့ Kali Linux က သင့်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။
So, after having read this you should have figured out if Kali Linux is the distribution you were looking for or at least got an idea about your choice.
If still you have not figured it out, here isasummary that will hopefully remove your remaining doubts:
ဒီအထိ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ Kali ကို သုံးသင့် မသုံးသင့် ပြန်စဥ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ သံသယရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် အောက်ပါ အနှစ်ချုပ်လေးတွေကို ဆက်ဖတ်ပြီး ဖယ်ရှင်းနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
Kali Linux is made with pentesters and pen-testing in mind so, expecting it to fit with your necessity might not be as simple even though it's completely possible.
Kali Linux သည် pentester တွေအတွက် pen-testing မှာ သုံးဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အလွယ်ပြောရရင် Hacking ပေါ့။
If you are new to Linux or have less experience with command line you might find Kali Linux to be not so user-friendly, even though our developers try to make it as user-friendly as possible some things might be intimidating to you if you are new.
သင့်အနေနဲ့ Linux command line တွေနဲ့ စိမ်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ Kali Linux က စစချင်းမှာ သင့်အတွက် ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
The developers always try to make Kali Linux as much hardware compatible as possible but, still some hardware/s might not work as expected or not work at all. So, its better to research hardware compatibility beforehand rather than breaking your computer later.
Kali ရဲ့ Developer တွေသည် Hardware တိုင်းနဲ့ သင့်တော်မှုရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့်လို့ အချို့သော Hardware တွေနဲ့ ကောင်းကောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိ မရှိကိုလည်း ချိန်ဆနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
If you are installing Kali Linux for the first time, it is recommended to install first in Virtual Machine then, after getting familiar with it, you can install it in your own hardware.
Kali ကို ခုမှ ပထမဆုံးအနေနဲ့ စ သုံးမှာဆိုရင် VirtualBox မှာ တင်သုံးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ အချက်ပါ။ VirtualBox မှာ တင်သုံးလို့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါ Windows မပါဘဲ Kali မှာတင် ကျွန်တော်တို့ နေ့စဥ်လုပ်စရာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ အဆင်ပြေလာတဲ့အခါ Windows ကို နှုတ်ဆက်လိုက်နိုင်ပါပြီ။
Hopefully, now you know if you need to install Kali Linux or not. If you have decided to install Kali Linux then, we welcome you to our community.
ခုလောက်ဆိုရင် Kali Linux ကို သင့်အနေနဲ့ install ဖို့ လို မလို သိပြီထင်ပါတယ်။ ဒါကိုမှ Kali Linux ကို တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုရင်တော့ Kali Community ကို သင့်ကို ကြိုဆိုနေပါတယ်။
If not, then see you later, and remember always "Try Harder".
မတင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ See U later ပါ။ "Try Harder"
Kali docs ကတော့ ပြီးပါပြီ။ မပြီးသေးတာက ကျွန်တော် ဆက်ပြောချင်သေးတာ။
Kali ကို သုံးမယ် လို့ စဥ်းစားတဲ့အခါ
ကျွန်တော်တို့သည် ဘာအတွက်သုံးမှာလဲဆိုတာကို ဦးစွာ စဥ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
Hacking လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုံးမယ့်သူကို Linux Newbie မို့လို့ Ubuntu လိုဟာမျိုးကနေ စ သုံး လို့ လမ်းညွှန်ရင် ပက်ပက်စက်စက် လွဲတာပါပဲ။ လမ်းမှားညွှန်တာလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
စဥ်းစားကြည့်ပါ။ Linux အကြောင်း ဘာမှ မသိသေးဘူး။ Hacking လေ့လာချင်လို့ Linux ကို စ သုံးကြည့်ချင်တဲ့သူကို Metasploit Framework တောင် အလွယ်တကူ တင်မရတဲ့ Ubuntu ကြီး ညွှန်တာ မှန် မမှန် ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
သာမန် Linux လေ့လာသူကို Ubuntu ညွှန်တာ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ Hacking စ လေ့လာမယ့်သူကိုတော့ Ubuntu ညွှန်တာ မှားပါတယ်။ မှားပါတယ်။ လုံးဝ မှားပါတယ်။
Burp Suit, Metasploit Framework, aircrack suit, ... ဒါတွေကနေ စ လေ့လာရမယ့်သူကို
ဒါတွေကအစ တစ်ခုချင်း လိုက်ရှာ install ခိုင်းမလား။ ဒါတွေ အသင့်ပါပြီးသားကို သုံးခိုင်းမလား။
သင်္ချာပါမောက္ခကို ရူပဗေဒပုစ္ဆာ တွက်ခိုင်းတာ သိပ်ပြဿနာရှိချင်မှ ရှိမှာပါ။
မြန်မာစာပါမောက္ခကို ရူပဗေဒပုစ္ဆာ တွက်ခိုင်းတာကျတော့ တမင် ညစ်ပတ်သလို ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
Kali မှာ ပါပြီးသား Tools တွေကို
https://tools.kali.org/tools-listing မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Click here to visit Kali Linux Tools Listing page
Unknown November 30, 2020 at 3:52 AM
Thanks your sharing knowledge and kindness !!!
Anonymous January 6, 2021 at 2:51 AM